Mayelana NATHI - Beijing Landwell Electron Technology Co., Ltd.
Ngonhlokodolobha obhalisiwe wezigidi ezingama-20, iLandwell yasungulwa eBeijing e1999 futhi ihlanganisa indawo yehhovisi indawo eyi-5000 metres. Kungumkhiqizo owaziwayo embonini yezokuphepha kanye nephini likasihlalo weChina Security Association. Esigabeni sokuqala, i-LANDWELL yathuthuka ngokushesha ngokuya ngezinto ezintsha futhi yasungula amalungelo ayo empahla yengqondo kanye nemikhiqizo ezimele yokuhlonza ezenzakalelayo "Landwell". Yakha i-Guard Tour System enkulu kakhulu ne-Intelligent Key Management System amabhizinisi asezingeni eliphezulu futhi ahola phambili nge-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa nangemva kokuthengisa. Kusukela ngo-2003 ukuhlehliswa komhlaba bekulokhu kusungula amagatsha namahhovisi ezweni lonke, e-shanghai, e-Shenzhen, e-Nanjing, e-Hangzhou, e-Wuhan,
Changsha, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Yantai, Shenyang, Xinjiang njll, izikhungo ezimbili ze-R & D nesikhungo esisodwa se-software. Ngokuya ngocwaningo lwezibalo olwenziwe ngabezindaba kulo mkhakha, imikhiqizo yakwaLandwell emakethe nobuchwepheshe emkhakheni bebe nguNo.1 weminyaka eqhubekayo eChina futhi babalwa nasemhlabeni wonke. Imikhiqizo ifaka onogada bokuqapha, uhlelo lokugada oluhlakaniphile, uhlelo lokugada umkhakha, uhlelo lokuphatha ukhiye ohlakaniphile, ukulawula ukufinyelela kwemithambo ephezulu, imikhiqizo ekhaliphile yokulwa nokweba. Ngezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo nobuchwepheshe bamuva, imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni angaphezu kuka-50 nasezifundeni ezinjenge-United States, Germany, UK, France, Russia, Japan, Brazil, Singapore, South Africa, Poland, South Korea njalonjalo .
Kusukela ngo-1999, iLandwell inomlando wokuthuthuka weminyaka eyi-16; Ifakwe ohlwini njengenye yeyunithi yokubhala yohlelo lwe "National Industry Standards of Guard Tour System",
Iphini likasihlalo weChina Security Association Inkampani edume umhlaba wonke emkhakheni wokuhlonza othomathikhi.
Ibhizinisi elinethonya nge-Pricing Right of Guard Tour System;
Umkhiqizo odumile wezokuphepha eChina.
Ukukhetha kokuqala kohlelo lokuqapha ezokuphepha, uhlelo lokuphatha ukhiye oluhlakaniphile;
Kususelwa ekwethembekeni: ibhizinisi elihlala njalo lisuselwa ekwethembekeni.
Ngobuqotho kubantu: kungukuhle komuntu, isisekelo sebhizinisi. Sonke sigcizelela ukunaka ukuthembeka nokugcina ukuthembeka okuhle kumakhasimende, osebenza nabo. Imali ibalulekile, kepha ukuthembeka kuphakeme.
IKhabhinethi Yokuphatha Okusemqoka, Ulenga Key Box, Small Box Management System Futhi Key, Ibhokisi Lokulawula Ukhiye, IKhabhinethi Yesitoreji Esikhulu Esikhulu, IKhabhinethi Ekhiyekayo,